ရထားခရီးသွားဂျာမနီမော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ9၏ 12 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပြီးသားသူတွေကိုသတိထားမိမ, သစ်တောသည်ဂျာမနီအနောက်တောင်ပိုင်းကျယ်ပြန့်သောသစ်တောဒေသဖြစ်သည်. ပိုများသောအထူး, က Baden-Wurttemberg ပြည်နယ်တည်ရှိသောကြောင့်တစ်သိသာသောအဘို့ကိုယူထားသောရဲ့. ထို့အပြင်, ဒေသတွင်းပြင်သစ်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင်သည်တာရှည်ဥရောပရဲ့မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အချို့ကိုကြည့်ဖို့လိုလျှင်, အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့ကြီးများ၏အနည်းငယ်ဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စာရင်းစေမည်. ဤရွေ့ကားမြို့ရွာတို့ဆိုင်ကယ်အားဖြင့်စူးစမ်းဖို့အကြီးအများမှာ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာအဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင်. တဖန်သင်တို့ကအဲဒီမှာရနိုင်သည်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင်သည်သင်၏လာမည့်အားလပ်ရက်များအတွက်ဥရောပတွင်ထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာဖို့မှလွတ်မြောက်ရန်ရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျကံရောက်နေ. ကယောဂနှင့်အပန်းဖြေရန်ကြွလာသောအခါအလှဆုံးဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကတချို့ဟာကမ်းလှမ်းရန်ပဒေသာများ. အိန္ဒိယကအများဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သော်လည်း…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အများစုမှာဘီယာ-မေတ္တာရှင်ခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏-လုပ်ဖို့စာရင်းတွင်မြူးနစ်မြင့်မားများ. ဒါဟာ Oktoberfest လည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ပေးထားရဲ့, ဒါပေမယ့် Nockherberg Starkbierfest – မြူးနစ်ခိုင်ခံ့ဘီယာပွဲတော်အပိုတစ်ခုခုယူဆောင်လာ. အဘယ်သူမျှမ, မရလူအစုအဝေး. သင်သည်များစွာသောအဖြစ်ထက်ဝက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ဘီယာနှစ်ဆဖြစ်ပါတယ်…